सन्त्रासमा निर्माणाधीन भौतिक परियोजना - Rajdhani Daily News
Home बिचार सन्त्रासमा निर्माणाधीन भौतिक परियोजना
By डा. माधवप्रसाद कोइराला
भौतिक परियोजना संवृद्धिका द्योतक हुन् । सरकार वा सम्बन्धित विभागले कति काम ग¥यो भनेर बाहिरी मूल्यांकनमा उसले कति संरचना निर्माण ग-यो हेर्ने गरिन्छ । तर, कोरोना भाइरसले गम्भीर संकट पैदा गराएको छ ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म कोरोना भाइरस सरुवा रोगको परीक्षणको दायरा बढाउन पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्ने रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्य विभागका निर्देशकलाई स्पष्ट योजनासहित तीन दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । कोरोना भाइरसले गर्दा संसारमा १२ लाख तीनहजार ९५९जना संक्रमित भएकामध्ये सक्रिय आठ लाख ९१ हजार ८७० र बन्द ३१ लाख २३ हजार ८९ केस देखिएका छन् । बन्द केसमध्ये दुई लाख सात हजार ३०१ अर्थात् ७९ प्रतिशत उपचार पछि घर फर्केका छन् भने ६४ हजार ७८८ अर्थात् २१ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । सक्रिय केसमध्ये हल्का अवस्थामा आठ लाख ४७ हजार ७७६ र गम्भीर ४४ हजार ९४ जना अवस्थामा छन् । छिमेकी देश चीनको आँकडा हेर्दा ८१ हजार ६६९ संक्रमित भएकामध्ये तीन हजार ३२९ को मृत्यु र ७६ हजार ९६४ उपचार पछि घर फर्केका छन् । यस्तै दक्षिणी छिमेकी भारतको आँकडा हेर्दा तीन हजार ५८८ संक्रमित देखिएका र ९९ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालको आँकडा हेर्दा हालसम्म ९ जना संक्रमित फेला परेको छन् । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले सहमतिको सरकारले र डा. प्रकाशशरण महतले मध्यावधि चुनावले कोरोना भाइरसको रोकथाम हुने विचार दिनु भएको छ ।
यो आँकडा हेर्दा भयावह स्थिति त होइन, तर भर्खरै प्राप्त समाचारमा कैलाली र कन्चनपुरमा थप तीन जना कोरोना भाइरसका संक्रमितको पहिचान भएको छ । तीमध्ये भारतबाट आएका २ कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका छन् । सदियौंदेखि चलिआएको नेपाल र भारतको खुला सिमाना हामीलाई अभिशाप भएको छ । भारत सरकारको नेपालप्रतिको हेपाहा दृष्टिकोणले २०७२ को महाभूकम्पपछि नाकाबन्दी गरेझैं कोरोना भाइरसको रोकथाम गर्न गम्भीर चुनौती बनेको छ । नेपाली र भारतीय जुन देशमा छन्, त्यहाँकै सरकारले हेर्ने गरी लकडाउन गर्ने सहमति उल्लंघन भएको छ । एकदुई केस मात्र होइन, अनेकांै लावालस्कर लागेर नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ जब कि नेपाल १३औं दिनको बन्दमा छ । यसरी भारतबाट लावालस्कर प्रत्येक दिन जारिरहने हो भने जति दिन लकडाउन गरे पनि ठोस उपलब्धि नहुने निश्चित छ । किनकि, नयाँ प्रवेश गर्नेले भाइरस लिएर आउने हो भने कोरोनाको चक्र नष्ट गर्न सकिँदैन ।
निर्माणधीन आयोजनालाई रोक्नु भनेको देशलाई कैयौं वर्ष पछाडि धकेल्नु हो
सुरुमा अमेरिका र पश्चिमाले यो भाइरसलाई चिनियाँ भाइरस भनेर खिसिटिउरी गरे अहिले प्रत्येक देश यो महामारीसँग जुधिरहेका छन् । इटालीमा चाइनिजसँग सम्बन्धित भएर हेरियो र सुरुमा नै क्वारेन्टाइनमा राखेर हेरियो, स्थिति गम्भीर नदेखिएपछि हल्का रूपमा लिइयो । इटालियन भ्रमण गर्न रुचाउने भएकाले विभिन्न देशबाट भाइरस बोकेर ल्याए । त्यो समयसम्म ढिला भइसकेको थियो । जब बिरामी नियन्त्रण बाहिर भए । देशले सबै स्रोतसाधनको उपयोग गर्दा पनि काबुमा आउन सकेन ।
हाम्रो पनि उत्तरी छिमेकीसँग खुला सिमाना नएभको कारणले हामी बेलैमा जोगियांै यद्यपि सरकारले लकडाउनको घोषण गर्नु अघिसम्म धेरै चाइनिजसँग नेपालीले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण, पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न भई काम गरिहेका थिए । उनीहरू अनुशासित, पेसाप्रति उत्तरदायी भएकाले नेपालीहरूमा संक्रमण हुनबाट हामी बच्यौं । तर, दक्षिणी छिमेकी भारतमा गएका नेपालीले र नेपालमा रहेका भारतीयले संक्रमण लिएर आउने–जानेले र अरू नेपालीमा–भारतीयमा सार्ने कुरा कैलाली र कञ्चनपुरमा भेटिएका सातौं र आठौं संक्रमितबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, हालसम्म बाहिरबाट आएका यक्तिबाट यो भाइरस सरेको थिएन । तर, आज दुबईबाट फर्किएका धनगढीका ३४ वर्षीय युवा जुन संक्रमित थिए, उनका एकै घरकी भाउजूलाई सारेको कुरा पुष्टि गरेको छ । यो नै नेपालमा बसेका नेपालीलाई बाहिरबाट आएकाले सारेको पहिलो केस हो । यसरी नेपालमा कोरोना भाइरस दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो घटनालाई हेर्दा आज १३औं दिनसम्म भारतका विभिन्न ठाँउबाट आएका नेपालीको लावालस्कर देख्दा भाइरस साथमै लिएर आउदैनन् भन्न सकिने ठाँउ रहेन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत औंल्याएको एसियाको सवाअर्ब जनसंख्या भएको देश भारतमा भयावह स्थिति आउदैन भन्न सकिँदैन । चीन सरकारको हुवेई प्रान्तका धटनालाई विश्लेषण गर्दा ३१ मार्च २०२० मा प्रकाशित ‘द टाइम्स अफ इन्डिया’ले एक रिसर्च रिपोर्टको हवाला दिँदै भनेको छ कि मे महिनाको बीचसम्ममा भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १४ लाखको हाराहारीमा पुग्नेछ । राजन गुप्ता र साइबलकुमार पालले द प्रिन्टर सर्भर फर हेल्थ साइन्समा प्रकाशित लेखकाअनुसार ३० लाख पुग्ने अनुमान गरेको छ । भारत अब २ सातापछि नै उसको स्थिति संसारको नजरमा अगाडि आउँछ ।
अझै पनि भारतसँग सिमाना जोडिएका खुला बाटो र चोर बाटोको पहिचान गरी स्वास्थ बिटहरूको स्थापना गर्नुपर्छ
यी माथिका तथ्यलाई हेर्दा भारतमा त्यहाँको सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाममा प्रभावकारिता नल्याएसम्म स्थितिमा सुधार हुने देखिँदैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्ने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । हालै सरकारले पूर्वाधार निर्माण नरोक्ने निर्णय गरेको छ यो कदमलाई स्वागत गर्दै कोरोनाको प्रभाव देशका विभिन्न परियोजनामा पर्ने देखिन्छ किनकि नेपाल सञ्चालित पूर्वाधार निर्माणमा भारतीय चिनियाँलगायत अन्य देशका मजदुरको संलग्नता रहँदै आएको छ ।
अब तत्काल नेपाल सरकारले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कामको चर्चा गरौं । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमनमा पनि पहिलो सर्त कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण परेको छ । नेपाल कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेकाले तदनुरुप योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका खुला बाटो र चोर बाटोको पहिचान गरी स्वास्थ बिटको स्थापना गर्ने र सबै सिमानापार गरी आएकाको नमुना लिने र परीक्षणमा पठाउने गनुपर्छ । नेपालका विभिन्न भागमा रहेका महानगर, नगर र पालिकामा रहेका जनप्रतिनिधिको समन्वयमा सम्भाव्य नमुना संकलन गर्ने र परीक्षणमा पठाउने काम गर्नुपर्छ । यो कामका लागि निम्न जनशक्तिको परिचालन गर्न सकिन्छ ः
१) सरकारसँग भएका मौज्दात स्वास्थ्यकर्मी,
२) सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र नेपाली सेनासँग भएका स्वास्थ्यकर्मी,
३) देशमा रहेका पशुस्वास्थ्यका स्वास्थ्यकर्मी ४) त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग संवद्ध कलेजहरू तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, प्रहरीले सञ्चालन गरेका स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका संस्थाले सञ्चालन गरेका संस्थाका शिक्षक र फाइनल वर्षका विद्यार्थीबाट तत्काल जनशक्तिको परिपूर्ति गर्दा व्यवस्थापन हुन्छ ।
यी माथिका जनशक्तिलाई चाहिने सुरक्षाका उपकरण, नमुमा संकलन गर्ने किटहरू उनीहरूको खानेबस्ने व्यवस्था आदि योजना सूक्ष्म रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । म एक भौतिक पूर्वाधारको विद्यार्थी भएकाले संरचनाको निर्माण, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा पनि कोरोना भाइरसको सन्त्रासले निर्माणाधीन परियोजनामा अवरोध भएको छ । निर्माणधीन आयोजनालाई रोक्नु भनेको कैयौं वर्षपछि धकेल्नु हो यसकारण निर्माणधीन आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर, मजदुर तथा कर्मचारीको कोरोनाको नमुना संकलन र परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मी खटाई संलग्नलाई आश्वत पार्नु आवश्यक छ । परियोजना निर्माणमा संलग्न मजदुर तथा कर्मचारीको सुरक्षाका उपकरण उपलब्ध गराइ उनीलाई पनि स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकाको बिमाको अनिवार्य व्यवस्था गरी परियोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
(लेखक पोखरा विश्वविद्यालय, स्कुल अफ इन्जिनियरिङका सहप्राध्यापक हुन्)